Wararka - Canton Fair 2019 (Oktoobar, Dayr)
Carwadii 126-aad ee Shiinaha Soo Dejinta iyo Dhoofinta 2019
Xinlian alxanka taagan 8.0X07
Canton Fair 2019 (Oktoobar, Dayr) - Carwada Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Shiinaha 2019 waxay imaan doontaa sanad-guuradeedii 126aad ee Shiinaha Soo-dejinta iyo Dhoofinta Carwada Pazhou Complex, Guangzhou inta lagu jiro Oktoobar 15 - 19 (Qalabka Elektaroniga & Qalabka Qoyska), Oktoobar 23 - 27 ( Alaabada Macaamiisha, Hadiyadaha & Qurxinta Guriga), iyo Oktoobar 31 - Nofeembar 4, 2019 (Qalabka Xafiiska, Kiisaska & Boorsooyinka, iyo Waxyaalaha Madaddaalada, Qalabka Caafimaadka iyo Alaabada Caafimaadka, Cuntada, Kabaha, Dharka & Dharka, Teendhada Caalamiga ah)!
Sidoo kale waxaa lagugu dhex geli karaa Bandhigga Yiwu Fair 2019 - Bandhigga Badeecadaha Caalamiga ah ee 25th Shiinaha Yiwu, bandhigga ganacsiga Shiinaha ee caanka ah ee lagu qabtay Yiwu, oo ah xarunta weyn ee ganacsiga ee Shiinaha.
Maaddaama ay tahay carwo ganacsi oo ballaaran oo dhammaystiran iyo takhasus, Shiinaha Soo-dejinta iyo Dhoofinta Carwada - Canton Fair @ China Import iyo Dhoofinta Carwada Pazhou Complex, Guangzhou waxay soo bandhigeysaa in ka badan 150,000 nooc oo ah badeecooyin tayo sare leh oo Shiinaha ah iyo badeecado dibedda ah oo leh astaamo gaar ah. Heerka cusbooneysiinta ee alaabada Shiinaha ayaa ka badan 40% kulan kasta. Waxay kuxirantahay faa'iidooyinka Shiinaha ee warshadaha waxsoosaarka iyo jihada dhanka baahida suuqyada caalamiga ah, Canton Fair waxay muujineysaa noocyo kala duwan oo tayo sare leh qiimo macquul ah.
Iyada oo taageero ka heleysa dad badan oo soo bandhigayaal ah iyo martida, Shiinaha Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Carwada (Canton Fair) ayaa hadda noqotay bandhiga ganacsi ee ugu ballaadhan taariikhda ugu dheer, heerka ugu sarreeya, cabirka ugu ballaaran, kan ugu dhameystiran noocyada soo bandhiga, iyo baahinta ugu ballaaran. iibsadayaasha dibedda iyo ganacsiga ugu weyn ee Shiinaha.
Kooxdayadu waxay istaagi doontaa 8.0X07, halkaas oo noocyo kala duwan oo ah MIG TIG Plasma toosh laga heli doono. Ku soo dhawow booqashadaada!